General - Ngwa Ngwa | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji 5)
Facebook na - akwadebe nkewa ohuru ohuru
Facebook na-ekwuwapụta nkewa ọhụụ ọhụụ. Chọpụta ihe banyere ngalaba ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nke na-abanye ahịa ahịa cryptocurrency
Hụ ebe a bụ isiokwu nke Google I / O 2018
Google I / O na-ahapụrụ anyị ọtụtụ akụkọ na ụfọdụ n'ime ha na-atọ ụtọ dị ka ndị a ga-agbakwunye na ...
Ticketmaster na - ele anya tufuo tiketi na mmejuputa ihu mmadu
Ticketmaster na-atụle itinye n'ọrụ usoro ọhụrụ iji chekwaa kwụ n'ahịrị na ebe nkiri. Ọ bụ maka ịhapụ ohere site na ihu ihu na ịtụfu usoro tiketi
N’oge na-adịghị anya, ọ ga - ekwe omume iji ụgbọelu were ịnya ụgbọ mmiri DJI si n’igwe na - eji Windows 10 rụọ ọrụ
O yiri ka ndị niile na-ọrụ nwere Microsoft ngwaọrụ na DJI ika drone na chioma….
Akụrụngwa ngwanrọ na usoro kwụ ọtọ nwere ike ịbụ onye kpatara nsogbu Uber
Ọdịdị usoro kwụ ọtọ nke kpatara ọghọm Uber. Chọpụta ihe banyere ihe yiri ka ọ bụ ihe kpatara ọgbaghara ụgbọ ala Uber na Machị.
Nintendo Switch Online ga-enwe igwe ojii
Nintendo Switch Online ga-amalite ọrụ ya na Septemba. Chọpụta ihe banyere mmalite nke ọrụ ntanetị maka njikwa na ụdị nke ndebanye aha anyị na-ahụ.
Ọtụtụ puku ụgha ụgha na ọdịdị ihu na Wales. Chọpụta karịa maka ihu glitches na asọmpi Champions League nke afọ gara aga.
NVIDIA na-ekwupụta kagbuo mmemme mmemme ya. Chọpụta ihe banyere ọkwa banyere njedebe nke mmemme ụlọ ọrụ a.
Mgbanwe Waymo: Googlegbọ ala Google nwere ihe ọghọm
Mgbe Tesla na Uber gasịrị, ọ bụ oge tupu ọ dịịrị ndị nrụpụta ndị ọzọ na - emepe sistemụ kwụ ọtọ: Waymo.
Anyị na-enyocha Huawei P20 atụmatụ niile nke teknụzụ dị elu na ọnụahịa kacha mma
Huawei P20, otu n'ime njedebe dị elu na-enye atụmatụ kachasị mma, na-egbochi ọnụahịa dị n'okpuru 600 euro. Anyị na-ewetara gị njirimara ya na arụmọrụ ya na nyocha a.
YouTube nwere nde mmadụ 1.800 na-arụ ọrụ kwa ọnwa
YouTube adịworị nso 2.000 ijeri ọrụ. Chọpụta ihe banyere ọnụọgụ ndị ọrụ na-eji weebụsaịtị kwa ọnwa.
IPhone X bụ ekwentị kachasị ere na nkeji iri na ise na 2018
IPhone X bụ ekwentị kachasị ere na nkeji iri na ise. Chọpụta karịa ahịa ekwentị Apple na ọnwa atọ mbụ n’afọ a.
Spotify nwere ndị debanyere aha nde 75
Ọrụ egwu gụgharia Spotify, ekwupụtala na ọ nweela ndị debanyere aha nde 75, ebe ọnụọgụ ndị ọrụ nke ụdị nnwere onwe ahụ ruru nde 99.
Russia mekwuo mkpọchi nke Telegram
Ihe mgbochi nke Telegram na Russia siri ike na usoro ọhụrụ. Choputa ihe ozo banyere ihe ohuru ha mere na obodo ahu igbochi ndi oru inweta ngwa a.
Koogeek Smart Dimmer, anyị tụgharịrị ihe mgbanwe HomeKit a gbanwere iji mee ka ụlọ gị mara ihe
Anyị ga-ekwu maka Koogek Smart Dimmer, mgbanwe maka ụlọ anyị nke ga-eme ka anyị nwee ike ime ihe anyị chọrọ na ọkụ.
Esi gbanwee okwuntughe Twitter gi
Gbanwe paswọọdụ gị na Twitter bụ usoro dị mfe nke ga-ewe naanị nkeji ole na ole. N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi gbanwee okwuntughe Twitter
EmerData, ụlọ ọrụ na-ezobe ndị isi Cambridge Analytica
Ọ dị ka ọ bụghị ihe niile ekwuru banyere nsogbu Cambridge Aanalytica. Ma ọ bụ na Tuesday gara aga anyị kwupụtara ...
Telegram kagburu ICO ya bidogo ijeri 1,7. Chọpụta karịa ihe kpatara ụlọ ọrụ jiri kagbuo ICO a.
Chọpụta VR Drone Autoflight, ihe mbido na a mbara-n'akuku HD igwefoto, FPV ugogbe anya na a 15-nkeji ụgbọ elu batrị maka naanị € 199. O nwekwara akpaka ọdịda na iwepụ, njikwa zuru oke, ọsọ ọsọ 2 na ọnọdụ acrobatics. Nke a bụ nyocha zuru ezu na nyocha anyị.
Cambridge Analytica mechiri ma kwụsị ọrụ ya kpamkpam. Chọpụta ihe banyere njedebe mmechi nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe ihere ya na Facebook gasịrị.
Huawei nwere ike ịmepụta sistemụ arụmọrụ ya
Huaweilọ ọrụ Asia bụ Huawei na-arụ ọrụ na sistemụ nke ya dị ka nke ọzọ na gam akporo, ma ọ bụrụ na gọọmentị America mechara nye ya iwu maka ịgafe mgbochi America na Iran.
Ọnwa 18 na-enweghị ike ịkwọ ụgbọala n'ihi na ọ bụ onye copilot na Tesla Autopilot ya
Chọpụta ihe banyere nkwenye nke nwa amaala Britain nke na-anya ụgbọ ala na-eji autopilot nke ụgbọ ala ya Tesla ma nọ ọdụ n'oche ndị njem.
Instagram na WhatsApp ga-enwe otu oku vidiyo
WhatsApp na Instagram ga-enwe nkwado maka otu oku vidiyo. Choputa ihe banyere ihe ohuru na abia na ngwa abuo.
The infotainment usoro nke VW na Audi nwere ike hacked na-enye ohere gị data
The infotainment usoro nke VW na Audi e hacked remotely na chọpụtara na ọ na-ekpughe ọtụtụ ozi banyere ọkwọ ụgbọ ala na ha jikọọ ama
Ọtụtụ puku mmadụ na-eme ngagharị iwe na Russia megide mgbochi nke Telegram
Ndị mmadụ 12.000 na-eme ngagharị iwe megide mgbochi nke Telegram na Russia. Chọpụta ihe banyere ngagharị iwe mere na ụnyaahụ n'obodo Moscow.
Nke a bụ ihe ụlọ ọrụ nuklia nke mbụ na-ese n'elu mmiri yiri
Russia bụ mba izizi wuru ụlọ ọrụ ike nuklia na-ese n'elu mmiri, ọhụụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme mmadụ nke ga-enye mba ahụ ohere ịnye ọkụ eletrik na ikpo ọkụ n'obodo ndị mepere emepe na-agbago mgbago ugwu nke nnukwu mba ahụ.
Jan Koum, onye nchoputa na onye isi nke WhatsApp, rituo
Onye nchoputa WhatsApp na CEO Jan Koum na-ekwupụta na ọ na-ahapụ ọkwa ya. Ọ dị ka ajọ mmekọrịta ya na Mark Zuckerberg na mkpebi ya anaghị eme ka o kwenye.
Snapchat na-ezube iwebata iwu nke 6-nke abụọ
Snapchat ga-ewebata iwu nke isii na nke abụọ. Chọpụta ihe banyere usoro ọhụụ a nke ụlọ ọrụ ahụ na-ezube iwebata nke ga-eweta esemokwu.
Nokia ga - ewebata Nokia X na Mee 16. Chọpụta karịa maka ekwentị izizi iji mara ọkwa a, nke ga-abata n’ime izu ole na ole.
Telegram agbadatala ọtụtụ awa n'ihi kpo oku na sava ya
Ihe ikpo okwu ozi Telegram abụrụla ọgụ nke DDoS kpatara nke mere ka ụfọdụ sava ya kpoo ọkụ.
Airbus na Audi sonyere ndị agha iji bulie ọrụ tagzi ha
Airbus na Audi na-akwalite ọrụ tagzi ikuku na obodo ukwu. Choputa ihe banyere mmekorita di n’etiti ulo oru abuo ndi na aru oru na nwa oge.
Apple ga-arụ ọrụ na iko eziokwu dịwanye elu
Apple na-arụ ọrụ na iko eziokwu augmented. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ America nke ga-eme atụmatụ ịmalite ngwaahịa a na 2020.
Spotify na - ewelite ọnụego ọnụego ya na Norway
Spotify na-ekwuputa ịrị elu ọnụego maka ọnụego ya na Norway. Chọpụta karịa gbasara ịrị elu ọnụ ahịa ụlọ ọrụ na mba Scandinavia. Ihe ha na-anaghị achịkwa ime na mba ndị ọzọ.
Steven Spielberg na-ekwu na ọ na-egwuri Mario na PlayStation
Steven Spielberg ekwuputala ndị mgbasa ozi Japan n'oge nkwalite nke Ready Player One, na ọ gbara Mario na PlayStation iji kwadebe mmepụta nke ihe nkiri ahụ.
Alexa ga-amalite inwe ebe nchekwa ya
Alexa Alexa ga-amalite inwe ebe nchekwa ya. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịakwute onye enyemaka ụlọ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Polestar 1, ngwakọ ngwakọ sitere na Volvo ga-efu euro 155.000
Polestar 1 bụ okpokoro okomoko nke Volvo mepụtara ma nke ahụ ga-enwe ọnụahịa nke euro 155.000 mgbe ọ na-aga ahịa afọ a 2018
Belgium amachibidoro igbe Loot na egwuregwu vidio
Akpọrọ igbe na egwuregwu vidio amachibidoro na Belgium. Chọpụta karịa gbasara mkpebi nke mịnịsta na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na-akwụsị igbe ndị a kwakọbara na egwuregwu.
Mgbe Apple na Twitter gasịrị, ugbu a, ọ bụ Google na-agbanwe emoji nke egbe
Google ahọrọla ịwụli elu na mgbanwe nke emoticons ụfọdụ, ma gbanwee piston emoticon maka egbe mmiri na-arụ ebe nchekwa.
Ọ bụ eziokwu na ndị nrụpụta nwere obere ụta maka mpekere nke dị na gam akporo ugbu a, eziokwu ...
Spotify na-emelite nsụgharị free ya na ndozi dị iche iche. Chọpụta karịa banyere mgbanwe ndị na-abịa na njedebe nke Random Mode na ọnọdụ nke na-ewe 75% obere data.
Ndị a bụ akwụkwọ ọhụrụ nke Windows 10 Eprel Mmelite, ikpeazụ isi Windows update
Microsof dọrọ aka na ntị na a ga-akwadebe Mmelite Eprel, nnukwu arụmọrụ Windows ọhụrụ nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ na anyị ga-agwa gị nke kachasị mkpa.
CD na-anwụ ka ụzọ maka gụgharia egwu
Isi okwu a doro anya na ọ bụ na egwu na CD na-apụ n'anya site na mmali na ókè, ihe a niile na-abịa ...
HyperX Pulsefire Ji nwayọọ, anyị na-enyocha oke egwu egwuregwu a
Anyị na-ewetara gị nyocha nke Pulsefire Surge pinpoint nkenke egwuregwu oke, ngwaahịa HyperX.
Nke a bụ otu Alienware siri rụkọta ọrụ na ụlọ nkwari akụ Hilton Panama City iji mepụta ụlọ ga-abụ ụlọ ịgba egwu zuru oke, nke bụ eziokwu bụ na ha emeela nke ọma.
Anyị nwere aka anyị ịmegharị nke otu n'ime ụlọ elu ụda nke na-enye nguzozi kachasị mma n'etiti mma na ọnụahịa na ahịa, Towerlọ Energy Energy 8 G2 Wood.
WikiLeaks agakwaghị enwe ike iji akaụntụ Coinbase gị. Chọpụta karịa maka mgbochi a na-ewute ego WikiLeaks na ị ga-achọta ụzọ ọhụrụ nke ego.
Netflix na-ebupụta akụkọ nke ya na ngwa maka iOS
Netflix ewebata Akụkọ na ngwa ya maka iOS. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ a nke ọrụ ntanetị na-ebute n'ime ngwa ya ma ọ na-abịa gam akporo n'oge na-adịghị anya.
Daisy: Robot ọhụrụ Apple nke na-ebibi iPhones
Daisy: Apple robot nke na-ebibi 200 iPhones kwa elekere. Chọpụta ihe banyere nke a Apple robot onye ọrụ bụ ikewapụ ndị bara uru mmiri nke igwe ma si otú egweri na ụzọ kasị mma.
Urawa Jurassic: Alaeze dara dara nke ikpeazụ na-adọkpụ ụgbọala ya
Nke ikpeazụ trailer maka Jurassic World: Fallen Kingdom dị ebe a. Chọpụta ihe banyere ikpeazụ trailer maka ọhụrụ nkeji nkeji na-ewu ewu na fim usoro ga-eze ẹkedori ke June.
Netflix nzọ na Europe, nke a bụ ọdịnaya ọhụrụ nke mmepụta mba nke na-abịa
Netflix ekwuputala ihe ohuru iri emere na Europe nke gha eme ka anyi ghara ikwu okwu.
Nwere ike ịzụta ugbu a na Amazon USA site na ebe ọ bụla
Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ emegheela mmechi ma ị nwere ike ịzụta ngwaahịa niile dị na ụlọ ahịa ahụ ...
Sonos jikọrọ aka na HAY wepụta mbipụta pere mpe Otu ihe atụ
Ọ bụ ọkà okwu na-ekwu okwu Sonos esorola onye na-emepụta ihe eji arụ ụlọ n’oge a HAY wepụta palette agba ọhụrụ maka Sonos One.
Android P nwere ike inwe mmegharị ahụ na ihuenyo dị ka nke iPhone X
Android P nwere ike ịnwegharị ngosipụta nke iPhone X. Chọpụta ihe banyere njirimara a nke nwere ike ịbụ akụkụ nke sistemụ arụmọrụ.
Twitter na-agbada gburugburu ụwa ma na-akpata ọgba aghara
Netwọk mmekọrịta a maara nke ọma tara ahụhụ dijitalụ n'ehihie a site na 15: 54 pm ụwa niile na nke a na-enweghị ...
Anyị nyochaa Energy Party 6, Energy Sistem ọzọ iji hazie ndị otu gị
Site na atụmatụ siri ike ma na-eme ihe ike, yana ezigbo ezigbo ọkụ ọkụ, anyị ga-enyocha Energy Party 6 n'ụzọ zuru ezu, nọnyere anyị ma chọpụta ihe na-eme ka ụlọ elu ụda a bụrụ ihe pụrụ iche, nke emebere ka ọ nwee ọtụtụ na karịa ihe niile dị egwu. , anyị ahụbeghị ụdị ihe ahụ ogologo oge.
Movistar na-enye 50 Mb Fiber Optic Rate na ego puru iche
Movistar: 50 Mb Fiber Optic Rate na nkwalite na a pụrụ iche price. Chọpụta karịa maka ọnụego a dị ugbu a na nkwalite na ọnụahịa pụrụ iche. Kpọọ ya ugbu a!
Apple ga-edozi Apple Watch Series 2 na nsogbu batrị n'efu
Ọ bụrụ na ị nwere 2mm Apple Watch Series 42 ma na-enwe nsogbu batrị, ugbu a bụ oge dị mma ịjụ maka usoro mmezi ahụ.
Usoro Spanish La casa de papel ghọrọ onye elere anya na asụsụ Bekee na Netflix
N'ime oge nsonaazụ akụ na ụba kwekọrọ na nkeji nke mbụ nke 2018, Netflix ekwenyela na usoro Spanish La casa de papel abụrụla usoro kachasị ele anya n'akụkọ ihe mere eme nke Netflix n'asụsụ na-abụghị Bekee.
O doro anya na ihe karịrị otu n'ime ndị ahụ bịara WhatsApp WhatsApp a na nkata ...
Anyị ga-egosi gị ihe kpatara eji kwado ọkà okwu a dị ka otu n'ime uru kachasị mma maka ego ndị ọzọ maka ndị na-anụ ọdịyo na ndakọrịta.
Dochọrọ Rowenta Air Force 360 ​​kpamkpam n'efu? Iji mee nke a, naanị ị ga - esonye na eserese ahụ nke Actualidad Gadget nke Rowenta ga - eme n’izu na - abịa.
Budata otu data Facebook anyị niile
Mgbe Cambridge Analytica na-eme ihe ọjọọ, anyị kwesịrị ịkwụsị iche ihe Facebook maara n'ezie banyere anyị. Ọ bụrụ na ịmabeghị, mgbe ahụ, m ga - enyere gị aka wepu anya mkpuchi ka ị nwee ike ibudata otu data Facebook anyị niile wee malite ịma jijiji.
Ihe oyiyi ehichapụrụ nke ọla edo iPhone X
A na-agbapụta ọlaedo iPhone X ma na-akwado FCC ugbu a. Choputa ihe banyere ekwenti Apple ohuru nke ihe onyonyo mbu ya diri.
SEGA na-ekwupụta Mega Drive Mini iji guzo na Nintendo
Nintendo egosila ya na ụdị Mini nke consoles. Ma kpachara anya, n'ihi na o doro anya na SEGA achọghị ịhapụ ụgbọ oloko ma ama ọkwa SEGA Mega Drive Mini maka ndị ọrụ.
Apple chọpụtara ndị ọrụ 29 na-ekpughe ozi nye ndị nta akụkọ
Apple kwupụtara usoro megide ndị ọrụ na-ekpu ozi. Chọpụta ihe banyere usoro ndị ụlọ ọrụ ga-emegide ndị na-ekpu ozi na pịa.
Xiaomi ga-atụle ịzụ GoPro
Xiaomi ga-eche maka ịzụta GoPro. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ụlọ ọrụ China nke chọrọ ịzụ akara ama ama egwuregwu ese foto.
A BQ smartphone na-agbawa ma na-ere ọkụ n'akpa uwe nke nwa okorobịa si Pamplona na-akpata ọkụ
Ofkwụ nwata dị afọ 14 si Pamplona tara ahụhụ gbara ogo 1 site na nke ...
Otu n'ime egwuregwu mkpughe, maka ngwaọrụ mkpanaka, n'ime ọnwa 4 anyị nọrọ afọ a bụ Fortnite, na-enweghị ...
Ihe omuma Mark Zuckerberg banyekwara n’aka Cambridge Analytica
Ọbụna onye guzobere Facebook, Mark Zuckerberg, echeghị izu ohi nke data onwe onye nke mechara ree ...
Dodocool DA158, anyị tụgharịrị mkpọtụ a na-akagbu ekweisi
Dodocool DA158 bụ a Bluetooth na headband ụdị ekweisi. Ha nwekwara nhichapụ mkpọtụ ma na-asọmpi asọmpi.
Mwepụta nke PlayStation 5 dị anya na-eme
N'agbanyeghị eziokwu na ụfọdụ asịrị na-egosi na Sony nwere ike ịmalite ọgbọ nke ise nke PlayStation n'afọ ọzọ ma ọ bụ na njedebe nke afọ a, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na anyị ka ga-echere ma ọ dịkarịa ala afọ ole na ole.
Spotify na-eme atụmatụ ime ka atụmatụ ya n'efu na-agbanwe agbanwe
Spotify ga-enyekwu uru ndị ọrụ nke atụmatụ efu. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ Swedish iji dọtakwuo ndị ọrụ na ikpo okwu ya.
Onu ogugu ohuru nke televishọn na AMD FreeSync site na Samsung di nso na nkuku ma gha adota ndi na ege nti rue ugbua emechiri emechi na ojiji nke ihe nlere,
Oge eruola ka ị mata oke mgbatị nke nsị data na ọdachi Cambridge Analytics ruru, yabụ anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi chọpụta ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị emetụtara.
ZTE Iceberg ga-enwe ọkwa abụọ na ihuenyo ahụ
Nhazi nke ZTE Iceberg na-egosi ọkwa abụọ na ihuenyo ahụ. Chọpụta karịa maka imepụta ụdị ọhụụ nke ika ahụ na-eju anya site na ịkụ nzọ na ọkwa abụọ.
Google abanyela ọzọ na igwe nyocha ihe oyiyi site na ịtinye obere nkọwa na nke ọ bụla n'ime ihe oyiyi ọ na-egosi anyị.
Naanị ụbọchị ole na ole fọdụrụ iji nweta uru nke onyinye dị na Playlọ Ahịa PlayStation
Anyị na-ewetara gị nchịkọta nke ihe onyinye ndị ị na-ekwesịghị ịhapụ site na Stlọ Ahịa PlayStation iji nwee nnukwu oge ịchekwa euro ole na ole.
Anyị na-enyocha Western Digital SSD, ụdị WD Green nke 240 GB
Anyị ga-enyocha otu n'ime nchekwa SSD kacha baa uru, 240 GB WD Green SSD. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe mere ọ ji bụrụ otu n'ime draịvụ ike kacha ere ahịa.
Netwọk mmekọrịta nke Jack Dorsey, otu n'ime ndị guzobere Twitter, na-ezube imezi Twitter API na mgbanwe ndị ga-eme ngwa ndị ọzọ maka iOS na gam akporo abaghị uru.
HomePod agbatara akara magburu onwe ya maka ụda dị mma, mana nke kachasị mma ka ga-abịa ma ọ bụrụ na Apple dị ezigbo njọ na ya.
A na - edozi foto ndị ọzọ ka anyị hụ LG G7 ThinQ nso
Obere ntakịrị ntakịrị ntakịrị LG G7 ka a na-ahụta ma taa bụ ihe kachasị pụta na izu ndị na-adịbeghị anya n'agbanyeghị na ha yiri ka ha chọrọ izobe "notch" ahụ.
Facebook ga - enye gị ohere ihichapụ ozi na ozi
Facebook Messenger ga-enye ndị ọrụ ohere ihichapụ ozi. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ahụ na-abịa na ngwa ahụ na mgbe ekwuputara ọbịbịa ya.
Amazon ga etinye ego 1.000 nde na iweta na obere enyo "Onyenwe nke Mgbaaka"
Asịrị kachasị ọhụrụ metụtara usoro ọhụụ nke Lord of the Rings, na-egosi na ọ nwere ike ịbụ usoro kachasị ọnụ na akụkọ ntolite niile, yana mmefu ego nke nde dollar 1.000.
Boom Supersonic nwere olile anya inwe ụgbọ elu ọhụrụ ya tupu 2023
Mgbe ogologo oge n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ọganihu nke ụgbọ elu ọhụụ ọhụrụ nke Boom Supersonic, ụlọ ọrụ ahụ mechara kwupụta na ọ na-atụ anya inwe ike ịnapụta nkeji mbụ na 2023.
Xiaomi were 10% nke ahịa ama na Spain
Nọmba Nọvemba gara aga 2017 Xiaomi kwupụtara ọdịda ya na mba anyị ma n'oge a ugbua ...
N'ime ụbọchị ole na ole akụkọ abụọ siri ike banyere ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya na nsonaazụ na-egbu egbu n'okwu abụọ ahụ, mere ka ụda olu dị mma ...
N'ikpeazụ, mgbe oge izu ole na ole gasịrị, Olympus PEN E-PL9 bịarutere na United States. Ndị ọrụ nọ na mba ahụ nwere ike ịmeworị igwefoto a nke na-apụ maka atụmatụ ya ochie ma nwee ọrụ dịka ndekọ 4K.
Ọ bụrụ n'ị na - achọ onye ahịa iyi iji budata ụdị faịlụ a, mgbe ahụ anyị ga - egosi gị nke kachasị ahịa ahịa kachasị dị na ahịa yana na ọ dịkwa ọtụtụ.
E gosipụtara nkọwa dị mkpa nke Google Pixel 3 na-esote
Ekele dịrị ndị otu XDA Developers, nkọwa ndị dị mkpa nke ntinye ọzọ nke otu n'ime ekwentị ndị kachasị atụ anya, Google Pixel 3, nwere ike ịbụ na a ga-agbapụta.
Google ga-ejikọ Eshia na Australia site na eriri dị n'okpuru oké osimiri
Google ka kwuputara na ha na-arụ ọrụ ugbu a na ntinye nke eriri ụgbọ okpuru mmiri ọhụrụ nke 9.600 kilomita iji jikọọ Asia na Australia.
Ndị ọrụ Google na-eme ngagharị iwe Pentagon Development Programme
Ndị ọrụ Google na-eme ngagharị iwe megide nkwado Google na ọrụ Maven, ọrụ ga-eme ka ndị mmadụ na ihe mara na onyonyo na-agagharị.
Onu ogugu Facebook nke emetutara Cambridge Analytica na-eru 87 nde
Izu atọ ka amaara Cambridge Analytica data breach asịrị mara, Facebook gosipụtara ọnụọgụ ndị ọrụ emetụta n'ezie: 87 na ọ bụghị nde 50.
Emechara nhazi nke Black Shark nke Xiaomi tupu ya ewepụta ya
Xiaomi si Black Shark leaked ke ya mbụ oyiyi. Chọpụta ihe banyere ekwentị gamer site na akara ndị China nke a ga-ewepụta n'ihu ọha n'ime ihe karịrị otu izu na mmemme.
IPadụ ọhụrụ a kwụsịtụrụ na iFixit mgbe ọ gbawara
IPad 2018, dị ka ọ dị na ọtụtụ ngwaọrụ Apple ndị ọzọ, enweghị ike ịnweta nnweta iFixit.
Spotify Shares Fall About 8% After Going Public
Otu ụbọchị mgbe mmalite nke Spotify gaa ahịa ngwaahịa, e nwere ịrị elu ma daa na uru nke onye ọ bụla ...
Pokémon GO Fest ọdịda na-efu Niantic $ 1,5 nde
Niantic ga-akwụ $ 1,5 maka Pokémon GO Fest. Chọpụta ihe banyere ụgwọ nke ụlọ ọrụ ga-akwụ maka ọdịda nke ihe omume na Chicago.
OnePlus CEO kpughere OnePlus 6 Star Atụmatụ
Nnukwu mbido ọzọ bụ OnePlus 6 na dịka nhota na njirimara ndị onye isi ya gosipụtara, ọ dị ka ọ gaghị emechu onye ọ bụla ihu.
Na-agbapụ mmadụ anọ merụrụ ahụ n'ụlọ ọrụ YouTube na California
Isi ụlọ ọrụ YouTube na California anatawo nleta site n'aka nwanyị ejikere, onye hapụrụla 4 merụrụ ahụ nke oke ike.
Ihe mgbako Logitech 950, nke dịpụrụ adịpụ nke iji jikwaa ngwaọrụ gị niile [AKW ]KWỌ]
Logitech Harmony 950, nke nwere ike ịchịkwa ọnụọgụgụ nke ngwaahịa eletrọnịkị n'ime ụlọ anyị, site na ntụ oyi na Movistar + decoder, taa anyị na-enyocha ya.
Ngwaọrụ Instagram ndị ọzọ kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ihi mgbanwe API
Instagram belata nke ukwuu nke ndị mmepe nwere iji data sitere na API, nke mere ọtụtụ ngwa ụdị a ji kwụsị ọrụ.
Apple ga-eji ndị nrụpụta nke ya na Macs
Apple na-agbagharị Intel ma jiri ndị nhazi ya na Macs. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ ịmalite ịmalite iji ndị nrụpụta ya na kọmputa ya.
Smart Light Bulb na Smart Socket, smart ọkụ na Koogeek [AKW ANKWỌ]
Taa, anyị na-ewetara gị ụzọ abụọ dị ọnụ ala na nke kachasị arụ ọrụ iji mee ka ọkụ ụlọ gị nwee ọgụgụ isi, anyị na-ekwu maka Smart Bulb Smart na Smart Socket site Koogeek.
Google ga-emechi adreesị mkpụmkpụ ya n'ime ụbọchị ole na ole
Adreesị Google dị mkpụmkpụ, otu n'ime ihe ndị kachasị mee ihe, ga-eme ka ndị kpuru ìsì belata n'April 13.
Tesla kwadoro Autopilot arụ ọrụ n'oge ọgbụgba Model X
A na-arụ ọrụ autopilot ahụ n'ihe mberede ụgbọ ala Tesla. Chọpụta ihe ndị ọzọ kpatara ihe mberede ụgbọ ala Tesla nke nwụrụ na nso nso a ndụ onye ọkwọ ụgbọ ala na California.
Kpochapụwo Obere Electric: “Devid agụghị ndị gbara” na n'èzí na futuristic n'ime
New York International Motor Show 2018 amalitela. Ma Mini ewepụtawo echiche nke Mini iconic. More kpọmkwem echiche ahụ kpochapụwo Obere Electric
Julian Assange na-aga ịntanetị site n'aka gọọmentị Ecuador
Embassylọ ọrụ nnọchite anya Ecuador na London ekpebiela iwepu njikọ ịntanetị nke Julian Assange nwere, n'ihi nnabata na-aga n'ihu na gọọmentị ndị ọzọ nwere ike imebi mmekọrịta gọọmentị.
Starlink: Elon Musk si na ntanetị satịlaịtị brọdband nke 4.425
Elon Musk's Starlink satellite na-akwado ya. Choputa ihe banyere oru nke onye kere SpaceX rụrụ nke nwetara nkwado nke FCC.
N'agbanyeghị atụmanya na Tiangong-1 enweghị ike ịchịkwa kpatara, anyị enwebeghị ike ịmara rue taa na ọ ga-adakwasị ụwa na Sọnde na-esote, Eprel 1, 2018.
Obere nke nta ka egosiri na ịkwọ ụgbọala kwụụrụ onwe ya ezughị oke dị ka mmadụ nwere ike ịtụ anya na mbụ dịka ha na-enwetakwa ego maka ụdị ịkwọ ụgbọala ha.
Site na ndọtị Facebook Container nke Firefox, anyị nwere ike ịkwụsị nnweta nke netwọkụ mmekọrịta nwere na data nchọgharị anyị niile, na mgbakwunye na igbochi ya ịchụ anyị ozugbo anyị hapụrụ netwọkụ mmekọrịta.
Otto Lior Ron si ngalaba-nchoputa na-ahapụ eze Uber. Chọpụta ihe banyere arụkwaghịm na nsogbu ndị Uber na-enwe ugbu a mgbe ihe ọghọm gburu izu ole na ole gara aga.
A ga-enyocha Tesla maka ihe ọghọm mberede na Model X. Chọpụta ihe banyere ihe mberede a na nyocha ụlọ ọrụ a na-eme ugbu a.
Apple weputara iPad dị ọnụ ala karịa Apple Pencil
Anyị akwadebewo ntụnyere dị n'etiti iPad 2017 na iPad 2018 ọhụrụ ka ị buru n'uche ihe dị iche na mbipụta ọhụrụ a dị ọnụ ala karịa nke iPad mbụ.
Foxconn mara ọkwa ịzụta Belkin maka $ 866
Foxconn zụtara Belkin maka nde $ 866. Chọpụta ihe gbasara azụmahịa ịzụ ahịa a na-emetụta ụlọ ọrụ America. Ha ka kwesiri inye ya njedebe.
Ozi sitere na mpaghara ga-abụ ihe kacha mkpa ugbu a na Facebook
Obi abụọ adịghị ya na netwọk mmekọrịta Facebook na-eme ozi ọma maka ọtụtụ ihe na nke kachasị mkpa bụ asịrị ...
Facebook welitere ikpe ikpe anọ maka mkparị Cambridge Analytica
Facebook gbara akwụkwọ ugboro anọ maka mkpesa Cambridge Analytica. Chọpụta karịa gbasara mkpa mmadụ na-akpakọrịta maka netwọkụ maka nsogbu ya na nzuzo.
Netflix ga-akwụ gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ịchọta njehie n'elu ikpo okwu ya
Netflix mepee mmemme nke ya maka ndị ọrụ. Chọpụta karịa maka usoro nkwupụta ụgwọ ọrụ nke usoro nkwalite nke na-enye ndị ọrụ ohere ịhụ chinchi.
Ndị ọrụ nde mmadụ abụọ na-eji Spotify eme ihe na-akwadoghị
Ndị ọrụ nde mmadụ abụọ na-eji Spotify na-enweghị akwụ ụgwọ na enweghị mgbasa ozi. Chọpụta ihe banyere ọnụọgụ ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nwee mgbasa ozi n'elu ikpo okwu.
Enwere ike iji Instagram zụta ihe na Spain ugbu a
Shozụ ahịa Instagram rutere Spain. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji tinye njikọ zụọ na onyonyo gị. Na purest labeelu ịke
Uber enweburu nsogbu na ụgbọ ala ya kwụ ọtọ tupu ihe mberede ahụ
Uber gbara mgba na ụgbọ ala kwurula na mbụ. Choputa ihe banyere nsogbu ndi kompeni nwere banyere ugboala ya tupu ihe mberede ojoo emere n’izu a.
Elon Musk na-emechi ibe ibe Tesla na SpaceX Facebook
Elon Musk na-emechi ibe Tesla na SpaceX Facebook. Chọpụta ihe banyere mkpebi ndị isi na-emechi ibe abụọ nke Facebook nke ụlọ ọrụ ya nwere ọtụtụ nde ụmụazụ.
NASA mechiri teknụzụ igwe Fermi n'ihi anomaly
NASA teliskop NASA kwụsịrị ịrụ ọrụ n'ihi ọdịda. Chọpụta karịa banyere ọdịda nke na-emetụta teliskop na nke mere ka NASA mechie ya nwa oge.
Anyị na-agbaji Guinness World Record maka ụwa na-ebutegharịkarị na #RecordAliExpress
Chọpụta ihe ndekọ ụwa maka imepụta unboxing kachasị ukwuu n'ụwa nwere ma nweta anwansi na AliExpress na ebube ya niile
Ọgbọ ọhụrụ nke HTC Vive, Vive Focus ga-akụ ahịa n'azụ afọ a, otu afọ mgbe ọ bịarutere China, ebe ha dị ugbu a.
Ma ọ bụ na mgbe ọgba aghara niile etinyere na ikpe nke Facebook na data ...
Ndị isi nchekwa nke Facebook, Twitter na Google gbara arụkwaghịm. Chọpụta karịa banyere ndị a arụkwaghịm na welitere ọtụtụ enyo na ahịa.
Google Play Instant na-ahapụ gị ịnwale egwuregwu na-enweghị nbudata ha
Ihe ohuru a na-akpọ Google Play Instant na ọ ga-enye anyị ohere ịnwale egwuregwu ahụ kpọmkwem na Playlọ Ahịa Google Play tupu ibudata ha.
Facebook na Cambridge Analytica na anya nke ajọ ifufe
Bọchị ndị a, netwọkụ mmekọrịta Facebook na-akụ si n'akụkụ niile na ihe dị egwu maka ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya ...
Windows 10 ga-adakọkwa na usoro HEIF nke foto
Nnukwu mmelite na-esote nke Windows na-enye anyị, ga-agụnye nkwado maka usoro mkpakọ ihe oyiyi HEIF
Sony kwụsịrị PS Vita na Spain
PS Vita kwụsịrị na Spain. Chọpụta ihe banyere mkpebi ụlọ ọrụ ịkwụsị ahịa njikwa ahụ na mba anyị.
Ọhụrụ Amazon Prime kwa ọnwa na-abịa
Onye na-ahụ maka ịntanetị dị ukwuu kwupụtara atụmatụ ọhụụ kwa ọnwa maka ndị ahịa ihu igwe chọrọ ịchụ Amazon Prime
Tencent guzoro na Fortnite site na mberede na iwepụta ngwa vidio PUBG ya na nyiwe mkpanaka.
Ha na-akwado ya na Reuters, doro anya ma kwupụta: ID nke iPhone X bụ afọ abụọ n'ihu ...
KsixFitness Explorer 2, anyị na-enyocha smartwatch na nnwere onwe nke otu afọ [Nyocha]
Anyị ga-eleba anya n'akụkụ niile dị mma nke Ksix weara bụ nke akụ ya bụ na ọ nwere ike ịdịgide otu afọ na-enweghị dochie batrị ahụ.
Ike Music Box 9 nyocha
Egwú Egwuregwu Egwuregwu Energy bụ okwu na-akpali akpali nke naanị € 9 na-enye anyị 90 W nke ike na njikọta na-atọ ụtọ site na Bluetooth, USB, microSD, FM Radio ma ọ bụ Audio-in. A na-enweta ya na agba abụọ (oji na ọcha) yana obere nhazi, ọ bụ nnukwu uru maka nhọrọ ego. Soundda dị mma
Ihe ọghọm nke mbụ nwụrụ na ụgbọ ala Uber kwụụrụ onwe ya
Ihe mbu na tupu ịmalite site na ozi oma nye ndi enyi, ndi ezinụlọ ...
Nwamba S31 na aka anyị, ikekwe ihe kasị eguzogide ọgwụ ama ke ererimbot [Nyocha]
CAT S31, ọnụ ọgụgụ e mere iji nagide oge ọrụ kacha dị oke mkpa na nke ahụ nwere ike bụrụ ezigbo enyi gị n'ọnọdụ ebe ekwentị anaghị adị mfe.
IOS chinchi 11 na-apụta ọbụna na ọkwa nke ụlọ ọrụ ahụ
Ihe onyonyo Apple kacha ọhụrụ gosipụtara anyị otu Apple ọbụna n’onwe ya enwebeghị ike idozi ahụhụ na iOS 11 mgbe ọ na-edekọ ọkwa ọhụụ ya.
Plattsburgh Aghọọ Obodo izizi iji machibido Mining Bitcoin
Obodo Plattsburgh machibidoro Ngwuputa Bitcoin na cryptocurrencies ndị ọzọ. Chọpụta ihe banyere obodo a nke ghọrọ onye izizi amachibidoro ọrụ a n'ihi oke oriri ike ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado usoro Star Trek na ịchọrọ ịmụ asụsụ Klingon mgbe niile mana enweghị agụụ ma ọ bụ ịmara otu esi eme ya, ekele Duolingo anyị nwere ike ịme ya n'ụzọ dị mfe
Spotify na-amalite nyocha site na olu enyemaka ya
Spotify na-anwale olu ya olu. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke gụgharia n'elu ikpo okwu na-ama ọnọde ya mbụ nnyemaaka nke ga-eme ka iji ngwa nnọọ mfe.
Barcelona Games World gbanwere ụbọchị na ebe maka mbipụta ya nke 2018
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ n'ime unu amatala ihe mere na Barcelona, ​​ruo oge ụfọdụ ...
Kaadị debit Amazon dị ugbu a na Mexico
Nnukwu Amazon anaghị akwụsị iju anyị anya na mbata nke ngwaahịa ọhụrụ ma na nke a anyị nwere ọhụụ ...
Otu ụlọ ọrụ ọkachamara n’ire BlackBerry emebere maka mpụ ahaziri ahazi na-emechi
Companylọ ọrụ Phantom Secure, na-ahụ maka ịkpụgharị BlackBerry ka ha bụrụ ngwaọrụ enweghị ike ịchọpụta maka ọnọdụ ahụ na mkparịta ụka emere site na ngwa emere maka ebumnuche a.
Microsoft kwadoro na Xbox One X ga-egosipụta FreeSync 2
Microsoft kwadoro na Xbox One X ga-enwe teknụzụ FreeSync 2 nke ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu ndị ka mma.
Stephen Hawking nwụrụ na 76
Onye a ma ama na-agụ kpakpando bụ Stephen Hawking nwụrụ n'ụtụtụ a nke Machị 14, 2018 n'ụlọ ya na Cambridge n'etiti ndị ikwu ya.
Anyị na-abịaghachi na nyocha isi okwu ọzọ maka gị, anyị na-achọ mgbe niile ka ị nọrọ ... ekele na Actualidad Gadget.
Emeelarị ọkwa izizi Philips Hue n'èzí
Philips Hue: A mara ọkwa ọkwa ọkụ ọhụrụ n'èzí. Chọpụta ihe banyere ọkụ ọhụrụ Philips na-abịa n'oge adịghị anya n'ahịa.
Netflix dọrọ aka ná ntị, ngwa ya adịghị na mgba ọkụ n'ihi Nintendo
Firmlọ ọrụ ahụ dọrọ aka ná ntị, Netflix adịghị maka Nintendo Switch n'ihi na akara ndị Japan enweghị ntakịrị mmasị na ya.
SoundPeats Q30, ekweisi ikuku nwere ọtụtụ ohere yana ọnụahịa mara mma nke ukwuu.
2001 HAL: Oghere Odyssey mepere ekele maka Alexa
Anyị nwere ịma ọkwa ụbọchị ahụ, anyị na-egosi gị otu ha siri gbanwee Amazon's Alexa n'ime HAL site na 2001: Odyssey ohere.
Fortnite Battle Royale na-abịa na ekwentị mkpanaaka
A ga-ahapụ Fortnite Battle Royale na ekwentị mkpanaaka. Chọpụta ihe banyere mmalite nke egwuregwu a ma ama na ngwaọrụ mkpanaka mgbe emechara afọ a.
The eBay Superweekend bụ onyinye pụrụ iche nke pụtara ìhè na mgbakwunye na ntinye ya nke ego ruru 60%, ndị a bụ onyinye kacha mma.
"Ikike ịrụzi iwu", kwụ ụgwọ maka ikike iji rụkwaa ngwaọrụ latrik
Na nke a ọ bụ iwu ma ọ bụ ụgwọ nke na-agbasa na United States, ...
Jon Favreu ga - ede ma mepụta usoro Star Wars. Chọpụta ihe banyere ịbinye aka na Disney mere maka usoro izizi dabere na usoro ihe nkiri a ma ama.
Porsche Mission E Cross Turismo, eletriki SUV nke akara German
Porsche na-aga n'ihu ịkụ nzọ na iwebata ụgbọ ala eletrik zuru oke. Ihe na-esote ịpụta bụ Porsche Mission E Cross Turismo
Facebook Messenger Lite na-ewebata oku vidiyo
Oku vidiyo na-abịa na Facebook Messenger Lite. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ahụ ngwa nkata dị fechaa gụnyere, nke anaghị adị ka ọ nwere ezi uche.
Ndị a bụ isi akwụkwọ akụkọ ga-esi n'aka gam akporo P
Guysmụ okorobịa nọ na Google mechara kpughee ihe ga-abụ ụdị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka nke gam akporo jikwaa, akpọ Android P
Betadị beta mbụ nke gam akporo P dị ugbu a
Anyị ga-ahụ ihe bụ akụkọ banyere gam akporo P Developer Preview, iji nweta echiche karịa ma ọ bụ obere banyere ọdịnihu nke gam akporo.
Nwere ike ileta ogige ntụrụndụ Disney site na Google Street View
Igwefoto 360º na-arụ ezigbo ọrụ n'okporo ụzọ, obodo, n'okporo ámá na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa anyị….
Nke a bụ ihe Huawei P20 dị, ama ama mbụ nwere ese foto atọ
Ihe oyiyi "gọọmentị" mbụ nke Huawei P20 ọhụrụ, smartphone mbụ nwere kamera 3 na azụ
Apple chọrọ ịkwụsị usoro iTunes LP site na 2019
Apple ga-ewepu iTunes LP tupu njedebe nke afọ a. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ ndị America ịkwụsị usoro a ugbu a.
Etu esi ebudata gifs na vidiyo site na Twitter
Nbudata vidiyo ndị ahụ ma ọ bụ GIF ndị ị na-ahụkarị na akụkọ ndị ị na-agbaso na Twitter bụ usoro dị mfe ma n'isiokwu a anyị na-egosi gị obere nduzi otu esi ebudata vidiyo na gifs na Twitter.
Etu esi wụnye ndọtị Chrome na Firefox
Kemgbe mmalite nke Firefox Quantum, ndọtị nke Chrome na Opera fọrọ nke nta ka ọ dabara n'ụzọ zuru oke na Firefox, naanị ị ga-eme obere usoro ntụgharị nke anyị kọwara n'uju n'isiokwu a.
Ihe mbu nke mbu nke oge nke ulo nke kaadi di ugbu a
Netflix ejiriwo ememe Oscar mee ihe iji wepụta mbụ teaser nke ihe ga-abụ oge ikpeazụ nke House of Cards, usoro nke Kevin Spacey kpamkpam.
Amazon na Google na-alụ ọgụ: akwu ngwaahịa ga-apụ n'anya Amazon
Ozi ọjọọ ọzọ maka google: agakwaghị ere ngwaahịa ụlọ akụrụngwa akụrụngwa ya na nnukwu azụmaahịa dị n'ịntanetị Amazon
Apple nwere ike ịkụ nzọ na ịhapụ MacBook Air dị ọnụ ala
Onye nyocha KGI a ma ama, Ming-Chi Kuo doro anya na mbido a nke 2018 ga-abụ afọ nke MacBook Air, Apple ga-agbanwe ya na ụdị dị ọnụ ala.
Ndị mmeri 2018 Oscar
N'okpuru ebe a, anyị na-egosi gị ndị mmeri nke 2018 Oscars, ụfọdụ onyinye a kesara ebe niile na enweghị nnukwu ndị mmeri
Ndị ọrụ 825 Amazon Spain kpọrọ oku na nkwekọrịta maka nkwekọrịta ọhụrụ ahụ
Ndị ọrụ 825 Amazon Spain kpọrọ oku na nkwekọrịta maka nkwekọrịta ọhụrụ ahụ. Chọpụta ihe banyere abụbụ ọrụ ha kpọrọ na ihe kpatara ya.
WhatsApp ga-agwa ndị ọrụ mgbe ebugharị ozi ha
Ọrụ ọzọ nke WhatsApp na-ezube itinye ga-abụ maka ịgwa onye ọrụ ahụ mgbe anyị zigara ụfọdụ ozi ha kesara anyị.
Nokia ịzụta Unium iji melite arụmọrụ na mkpuchi Wi-Fi n'ụlọ
Nokia gara n'ihu na atụmatụ ya ma kwupụta zụta Unium enwere ike, nke a bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ ọkachamara na ...
Instagram ga - agbakwunye ọrụ oku na vidiyo
Facebook na-arụ ọrụ iweta atụmatụ ndị ọzọ na Instagram. Ihe ikpeazu nke achoputara bu na o gha etinye onu oku na vidiyo
GitHub Na-ata Ahụhụ Kasị ukwuu DDOS Na Akụkọ Internetntanetị
Ulo elu GitHub tara ahụhụ DDOS kachasị ukwuu na akụkọ ntolite Internetntanetị na February 28, mwakpo ọ meriri n'enweghị nsogbu ọ bụla, n'ihi nchebe ọ nwere megide ụdị ọgụ a.
Microsoft Soundscape na-enyere ndị isi na-ahụ ụzọ aka ịhụ ụwa
Microsoft ka malitere ngwa ọhụrụ na Apple App Store, iji meziwanye mmekọrịta nke ndị ọrụ nwere nsogbu ọhụụ na gburugburu ha akpọrọ Sondscape
Sony na-achụpụ ụlọ na windo na egwuregwu efu nke March's PlayStation Plus
Sony kwupụtara na nkeji ikpeazụ egwuregwu vidiyo nke a ga - enwere n'efu n'ọnwa Machị site na ndenye aha PS Plus, ma hapụ gị ka imeghe ọnụ gị, Bloodborne GOTY na Ratchet & Clanck.
Sony A7 III, atụmatụ nke ọhụrụ Sony Full Frame
Sony egosiputa ntinye ohuru ohuru ya na igwefoto na-enweghị enyo, igwefoto nke na-enye anyị ohere ịdekọ na 4k HDR, 24 mpx nke mkpebi na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke atụmatụ ọhụrụ.
Twitter na-ebupụta ngalaba ibe edokwubara ka ọ gachaa hụ tweets ịchọrọ ịgụ
Twitter nwere akara ibe edokwubara iji chekwaa tweets. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ nke mechara rute na netwọkụ mmekọrịta ama ama.
E gosipụtara LG G7 na MWC, mana na nzuzo
Informationfọdụ ozi agafeela ụdị ngosi maka mmadụ ole na ole nwere ihu ọma ebe LG mere ka ha hụ ihe ngosipụta nke ga-abụ ekwentị ndị na - esote ya.
Na "notch" na MWC ma ọ bụ agha ka idetuo ruo mgbe ntụpọ
Agha iji detuo Apple enweghị mgbagha, enweela ọnụ ọgụgụ ole na ole egosiri n'oge Mobile World Congress na "ọkwa" a.
Ihe kacha mma nke MWC 2018
Ọ bụrụ na ị kwụsịtụla na MWC, n’isiokwu a anyị na-egosi gị nke bụ ekwentị kachasị mma enyere n’ibe mbipụta 2018.
Netwọk Cambium "Oke ”ntanetị" ga-enye njikọta Wi-Fi n'ebe ọ bụla na mbara ala
Mgbe anyị gara n'ugwu ma ọ bụ ọbụlagodi n'okporo ụzọ ndị na-agafe ugwu gafere, njikọta ma ọ bụ mkpuchi nke ...
Ihe mmetụta mkpịsị aka n'okpuru ihuenyo nke Vivo X20 Plus na-arụ ọrụ n'agbanyeghị na a kpụchara ya
Nnwale ndị na-eguzogide nke a na-etinye Vivo X20 Plus na-egosi anyị na n'agbanyeghị ịkọcha mpaghara ihe mmetụta, ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ zuru oke.
Agha megide micropayments na egwuregwu vidio, ga-emetụta aha afọ
Na United States of America ha doro anya na ihe a ga-amalite ịchịkwa, ugbu a, ha ga-akpọ egwuregwu vidio ndị a na ọ ga-emetụta afọ kachasị atụ aro.
Vero yiri ka ọ bụ netwọkụ mmekọrịta eji ejiji ma chọọ ịkwatu Instagram
Ugbu a Vero abịa, netwọkụ mmekọrịta ana - eche n'echiche iji jikọọ gị naanị ndị hụrụ gị n'anya.
Samsung Galaxy S9 na nke Sony Xperia XZ2
Tụnyere nke anyị nwere ike ịhụ nke bụ isi njiri mara njedebe dị elu nke Samsung na Sony.
Otu esi azụta Samsung Galaxy S9 na S9 + dị ọnụ ala
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbụ otu n’ime ndị ọrụ izizi iji nwee ọ enjoyụ na Galaxy S9, mana ịchọrọ ịchekwa ego, ihe gbagwojuru anya ozugbo ọ rutere n’ahịa ahụ, ị ​​nwere ike iji atụmatụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere.
Ulefone na-ebupụta ụdị ihuenyo abụọ iji jide ahịa ahụ
Ulefone T2 Pro na onye otu ya Ulefone X, ọnụ ya nwere ihu igwe FullView so "notch" ama ama nke iPhone X ya na ndị nrụpụta MediaTek iji chekwaa ntakịrị.
SEAT ga-abụ onye mbụ na-emepụta ụgbọ ala n'ụwa tinye Shazam
Na MWC anyị nwere, na mgbakwunye na smartphones, netwọk, mbadamba na ngwaọrụ eletrọniki ndị ọzọ, ụdị ụgbọ ala. N'okwu a…
Samsung Galaxy S8 + na nke Samsung Galaxy S9 +
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ma ọ bara uru mgbanwe ahụ wee si na Galaxy S8 + gaa na Galaxy S9 +, mgbe ahụ anyị na-egosi gị tebụl ntụnyere ebe ị nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na mgbanwe ahụ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị.
Samsung Galaxy S8 na Samsung Galaxy S9
Ọ bụrụ na ịmabeghị ma Samsung Galaxy S9 ọhụrụ ahụ, n'isiokwu a anyị na-egosi gị ntụnyere n'etiti ọhụụ ọhụrụ Samsung na Galaxy S8
Vlọ Movistar na Vodafone V-Home, anyị na-atụle ọrụ ụlọ ejikọrọ ọhụrụ
Companieslọ ọrụ abụọ kachasị ike n’ahịa mba, ekpebiela ịgba nzọ n’ozi ụlọ ha nke iji dọta ndị ahịa ọzọ, Movistar Home na Vodafone V-Home.
ZTE lekwasịrị 18: 9 na ZTE Blade V9
ZTE Blade V9, ihe nlere ohuru nke nwere ihe ndi kachasi elu na uzo ihu site na mma.
Nokia na - ebupụta ekwentị ọhụrụ ise, gụnyere edegharịrị ekwentị Matrix a
Companylọ ọrụ Finnish Nokia gosipụtara na MWC ise nke ọnụ ọgụgụ ndị ga-erute ahịa n'ime afọ 2018 niile.
Galaxy S9 bụzi gọọmentị: ọnụahịa na atụmatụ
Mgbe ọtụtụ ọnwa gasịrị, asịrị na ndị ọzọ, ndị Korea nke Samsung emesịa gosipụta ọkwa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nke anyị gosipụtara gị nkọwa, atụmatụ na ọnụahịa niile.
Otu esi agbaso #Unpacked nke Samsung Galaxy S9 na S9 Plus
Ozugbo MWC gara aga malitere, anyị ahụla ozi site na Huawei n'ehihie a ma ugbu a ọ bụ oge Samsung ...
Alcatel na-eme ka ngwaọrụ ya dị ọhụrụ maka mmefu ego niile
Firmlọ ọrụ French Alcatel ejiriwo MWC mee ihe iji gosipụta ọkwa ọhụrụ ya maka 2018, ha niile nwere usoro ngosi nke 18: 9.
Openedlọ ahịa Xiaomi nke atọ dị na Spain mepere na Barcelona
Xiaomi mepere ụlọ ahịa mbụ ya na City taa mepee na ụfọdụ ihe ịtụnanya dịka igwe onyonyo ọhụụ ga-abịa n'ahịa anyị n'oge na-adịghị anya.
Amazon imeghe ulo ahia ohuru isii ATM
N'ihi ihe ịga nke ọma mbụ nke ụlọ ahịa enweghị ahịa ego nke Amazon, Amazon GO, agbamume ụlọ ọrụ ahụ ma mepee ụlọ ahịa isii ọhụrụ na United States.
MWC dị ezigbo nso na ụfọdụ n'ime ngwaọrụ ndị anyị na-atụ anya ịhụ
Obi abụọ adịghị ya, anyị nọ nso mmalite nke MWC 2018 na ụlọ ọrụ dị iche iche enweworị ihe niile ...
Nke a bụ otu ị ga-esi mee ka ụgbọ ala Tesla ahụ dị ngwa, ọ ga-ahapụ gị kpamkpam
Anyị na-ekwu maka ụgbọ ala Tesla ruo ọtụtụ ọnwa, igwefoto weghaara ya n'okporo ámá ndị United States na ọsọ ọsọ.
Edere nkọwa na ezigbo nkọwa nke Galaxy S9, ndị a bụ njirimara ya
Anyị nwere ihe niile, ndị a bụ njirimara doro anya, nkọwa na ezigbo foto nke Galaxy S9 nke anyị hụrụ na ọhụụ kachasị ọhụrụ.
Kedu ihe ga-eme ụgbọ ala ahụ nke Tesla zigara na mbara igwe? Yabụ ị nwere ike ịgbaso ụzọ ndụ ha dị ndụ
Mwepụta nke Falcon Heavy, SpaceX roket nke bu Tesla Roadster n'ime, hapụrụ anyị mgbagwoju anya ...
Sony na-akwadebe "egwuregwu kacha mma n'efu" maka Machị na PlayStation Plus
PlayStation na-akwadebe mwepụta nke egwuregwu kacha mma na akụkọ ihe mere eme maka ọnwa a nke ọnwa Machị na PS Plus.
Nke a bụ otú Galaxy S9 si lee anya n'ihi eziokwu dịwanye elu
Eziokwu gbara ume bụ nnukwu nzọ nke ụlọ ọrụ Cupertino, Apple. Otú ọ dị, Samsung yiri ka ọ chọrọ ịnyagharịa ...
Nzacha ọhụrụ Sony Xperia XZ2 mgbe ọ fọrọ ụbọchị ise ka MWC bido
Ma ọ bụ na anyị ekwuolarịrị gbasara akụkọ gbasara okwu gbasara ekwentị nke enwere ike ịhụ na ...
Authorizedlọ ahịa Mi nke atọ nyere ikike na Spain ga-emeghe ibo ya na Satọde a na Barcelona
Tupu mụ amalite ngosi nke ụfọdụ ngwaọrụ, smartphones na ngwaahịa ndị ọzọ metụtara MWC ...
Samsung gosipụtara 30’72 TB SSD ọhụrụ ya
Samsung ka gosipụtara diski a na-akpọ SSD disk nke nwere ikike kachasị elu n'ụwa, otu akụkụ ahaziri iche maka iji azụmaahịa na-apụta maka 30 TB.
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Nintendo's Mario dị na akwụkwọ nkà ihe ọmụma a
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Mario, ma ị dị afọ 40 ma ọ bụ 5, n'ezie ị maara onye anyị na-ekwu. Mario na-eburu ...
Algọridim ọhụrụ nke Google ga-ebu amụma ihe egwu dị na obi site na ile anya
Algọridim ọhụrụ nke Google ga-ebu amụma ihe egwu dị na obi site na ile anya. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ algorithm nke ụlọ ọrụ a ga-eji na ahụike n'ọdịnihu.
Wụkchara nkọwa niile, ọnụ ahịa na foto ọhụrụ nke Galaxy S9 ọhụrụ
Ma ọ bụ ihe na - emekarị kwa ụbọchị ụbọchị tupu ị gosipụta ngwaọrụ ...
Waymo nwetara ikike iji njem ụgbọ ala ya kwụ ọtọ
Waymo nwetara ikike iji ụgbọ ala ya kwụ ọtọ. Chọpụta ihe banyere ikike ụlọ ọrụ ahụ nwetara nke na-enye ya ohere ịsọ mpi na Uber na Arizona.
Ọkachamara ndị tụrụ aro Messenger Kids bụ ndị Facebook kwadoro
Dabere na ndị agbakwunyere Wired, ndụmọdụ dị mma nke ụlọ ọrụ Messenger Kids natara n'aka ụfọdụ ndị ọkachamara na mkpakọrịta zụtara ụlọ ọrụ Mark Zuckerberg.
Dyson: companylọ ọrụ agụụ iji wepụta ụgbọ ala eletrik atọ
Companylọ ọrụ na-ekpo ọkụ agụụ Dyson ga-ebupụta ụgbọ ala eletrik atọ kachasị elu. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ụlọ ọrụ iweta ụgbọ ala ndị a n'ahịa.